पत्रकार विनोदसिंह बिष्टले गरे जन्मदिनको अवसरमा अक्सिजन खरिदका लागि सहयोग !! | सुदुरपश्चिम खबर
बैतडीका एक पत्रकारले आफ्नो जन्मदिनको अवसर पारेर अक्सिजन खरिदका लागि सहयोग गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय समाचार समिति(रासस) का बैतडी समाचारदाता विनोदसिंह विष्टले अक्सिजन खरिदका लागि सहयोग गर्नुभएको हो ।
पत्रकार विष्टले आफ्नो जन्मदिनमा गरिने फजुल खर्च कटाएर शहीद दशरथचन्द स्मृति प्रतिष्ठानको अगुवाइमा जारी सहयोग संकलन अभियानमा सहयोग गर्नुभएको हो । जिल्ला अस्पताल बैतडीमा अक्सिजन अभाव रहेको भन्दै प्रतिष्ठानले सहयोग संकलन अभियान सञ्चालन गरेको छ । जेठ १२ गते २८ वशन्त पार गरेर २९ वशन्त प्रवेश गरेको अवसरमा २ हजार ८ सय २९ रुपैंया प्रतिष्ठानको खातामा जम्मा गरेको पत्रकार विष्टले जानकारी दिनुभयो ।
जन्मदिन मनाउन गरिने फजुल खर्च कटाएर कोरोना महामारीमा अक्सिजन नपाएर प्राण त्याग गरिरहेका नागरिक बचाउनका लागि उक्त सहयोग गरिएको उहाँले बताउनुभयो । आफ्नो सानो सहयोगले कसैको जीवन रक्षामा सहयोग पुग्ने हुँदा उक्त सहयोग गरिएको उहाँको भनाई छ । बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिका ३ श्रीकोट घर भएका पत्रकार विष्ट गएको ११ वर्षदेखि पत्रकारितामा सक्रिय रहनुभएको छ ।
पत्रकार विष्ट पत्रकारितासंगै सामाजिक सेवामा समेत संलग्न हुदैं आउनुभएको छ । प्रतिष्ठानले जन्मदिनमा फजुल खर्च कटाएर सहयोग गर्नुभएकोमा पत्रकार विष्टलाई धन्यबाद ज्ञापन गरेको हो । जेठ २ गतदेखि सञ्चालन गरिएको अभियानमा हालसम्म ८ लाख ६२ हजार ९५९ रुपैंया संकलन भइसकेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
उक्त संकलित रकम अक्सिजन आपुर्तीलगायतमा खर्च भइरहेको उक्त अभियानमा संलग्न अभियान्ता महेश भट्टले बताउनुभयो । उक्त अभियानमा सहयोग गर्नका लागि अपिल समेत गरिएको छ । (radio7star बाट सभार)
वेदकोटमा लसुनले ल्यायो किसानमा समृद्धि !!
एसईई सञ्चालनको विकल्पबारे कार्यदलले सुझाव तयार गर्दै !!